Izigameko zakamuva zembula ezobunhloli izinqe – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Izigameko zakamuva zembula ezobunhloli izinqe
Izigameko zakamuva zembula ezobunhloli izinqe
Ubukhosi News May 11, 2018
Ukungakwazi ukukhalima izigameko ezithile kushiya imibuzo ngezinga lobunhloli nokuma ngomumo kwamaphoyisa kuleli
KUBANTU abaningi iNingizimu Afrika iyizwe elihamba phambili emikhakheni eyahlukene. Kwezomnotho ikleliswe nezikhondlakhondla ezifana neNigeria ne-Egypt. Inqubo yokuphatha noMthethosisekelo kutuswa nxazonke. Ukusingathwa komthetho nakho kutuswa ngokufanayo. Okunye lelizwe elituswa ngakho ngezokuphepha. Ukuthenjwa nokucija kombutho wezokuvikela kuleli kwenze laba yisixazululo sezinkinga emazweni ehlukene e-Afrika njengoba umbutho walo usebenza ngaphansi kwe-United Nations ekubhuleni imililo kulawa mazwe.
Nokho njengoba sisho isiZulu sawokhokho ukuthi kakukho soka lingenasici, kukhona okulibatha noma ichashaza ngeNingizimu Afrika. Lokhu kuvela ngasohlangothini lwezobunhloli. Izehlakalo zakamuva zenza ingashabalali imibuzo ngalolu phiko olumqoka nxa kukhulunywa ngokuphepha kwezwe. Isigameko sokugcina kube yileso esenzeke emgwaqweni onguthelawayeka ngaseMooi River KwaZulu-Natal. Ukubhubhiswa kwamaloli angaphezu kwama-20 isibhakabhaka sibe bomvu ngenxa yomlilo kushaqise abaningi. Lesi sigameko sikhinyabeze umnotho wendawo kanjalo naloyo othinta izifundazwe ezahlukene. Kwabebelinde impahla ebivela echwebeni laseThekwini kube khona ukukhathazeka nokulahlekelwa yinzuzo.
Ngokombiko wamaphoyisa idlanzana labathile seligamenxe elesikhombisa kusihlwa ngesonto lilimaze amaloli angama-35. Yize kwamukeleka ukuthi izigameko ezinjengalezi ziyenzeka kuvuka imibuzo kwabaningi yokuthi kungani ezobunhloli zingakwazanga ukuthola ngalokhu kungakenzeki. Okwenza lo mbuzo ube mqoka wukuthi isigameko esinjengalesi besingaqali njengoba emasontweni edlule kuke kwanesimo esifanayo. Yize kungaqinisekiswanga kepha kubikwe ukuthi okunye okudala umsindo kube wudaba oluthinta ukuqasheka kwabokufika emsebenzini wokushayela amaloli nokungathi nxa kuliqinso kwenze isimo sibe mazonzo ngoba udlame selungaphenduka isenzo sodlame nenzondo ebhekiswe kwabokufika.
Akukhona KwaZulu-Natal noma eMooi River lapho umbuzo ngokucija kwezobunhloli ugqama khona. Udaba lwaseMarikana lapho kwafa khona izisebenzi ngesandla samaphoyisa ziyisibonelo sokungaciji kwezwe kwezobunhloli. Yize lesi kwabe kuyisiteleka kwakukhona ubufakazi bokuthi kungenzeka isimo sibe sibi kunesiteleka esejwayelekile. Sekungumlando ukuthi kwaphetha ngesibhicongo.
Esinye isigameko kwaba yileso sodlame olwabe luphakathi kwabokufika nabakuleli okwenzeka eThekwini nasezingxenyeni ezithile zeGoli. Lapha akugcinanga nje ngokwebiwa nokubhujiswa kwengqalasizinda kepha kwaba nemiphefumulo elahlekayo. Nalapha umbuzo uthi zazikuphi izinhloli ukuze zikwazi ukuphunga into eyabe isobala ukuthi izobhebhetheka ilimaze umphakathi.
Umsindo oqubuke eNorth West nokuyilapho izakhamuzi zicekele khona impahla zikhala ngokuthi kazisamuzwa uNdunankulu Wesifundazwe nakhona kuveze imibuzo. Nalapha lesi simo besikhanyela nayinoma ngubani ukuthi singahle siphume esandleni. Ephawula ngodlame nobudlova okwenzeke eNorth West uMkhuzi Wamaphoyisa kuleli uKhehla Sitole ukhale ngamathamelangozi asebezisa lesi simo.
Esitatimendeni asikhiphile uSitole uphawule wathi: “Lezi zenzo eziqale samibhikisho emasontweni ambalwa edlule seziphenduke ubugebengu njengoba sibone sekushiswa izimoto, kwebiwa impahla ezitolo nasemabhilidini nezikhungo zikaHulumeni zilinyazwa zonakaliswa.”
Isimo sibe sibi kakhulu eNorth West nokuphoqeleke ukuthi kuze kungenelele uHulumeni kazwelonke njengoba bese kunezinsolo zokuthi amaphoyisa aqinisa isandla emzamweni wokunqanda udlame nobelelesi. Okunye okube buhlungu wukuphangalala komuntu okuthe lapho isithuthi seziguli sizama ukumphuthumisa esibhedlela sahlangabezana nenkinga yokungakwazi ukuphuma endaweni ngenxa yezibhelu. Kuthe singaphuma kwatholakala ukuthi obephuthunyiswa esibhedlela usephangalele.
Odabeni lwezinsolo zokuqinisa isandla, iqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance ( DA) seliphakamise ukuthi uPhiko olubhekelele ukusebenza nokuziphatha kwamaphoyisa luphenye. Yize lokhu kungelona iphutha kepha kukhona ukwesabela ukuthi amathamelangozi angahle asebenzise leli thuba ukuqinisekisa ukuthi agila imikhuba ngoba azi ukuthi amaphoyisa angahle abe mathintanyawo nxa ezama ukunqanda isimo.
Zonke lezi zehlakalo, noma ngabe ngezamabomu noma zisemthethweni kukodwa okugqamayo lokho wukuthi izinhloli zakuleli zisehluleka ukuyibamba inkulumo noma izehlakalo kungakenzeki umonakalo. Lokho kuyinto eyethusayo njengoba imikhonto ivele icije nxazonke odabeni lomhlaba. Umbuzo owokuthi uma idubula intabamlilo ngabe ezobunhloli namaphoyisa kuyobe kumi ngomumo yini.
Basenalo ithemba ngokuthula abahlali baseGlebe